လာကာဇက်နဲ့ ဟာဇက်တို့ဟာ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေပြသနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၈)ရဲ့ အကောင်းဆုံး(၁၁)ယောက်စာရင်းမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ လာကာဇက်နဲ့ ဟာဇက်
8 Oct 2018 . 3:26 PM
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၈)ကတော့ ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၈)မှာ ပွဲကောင်းတွေပါဝင်ခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ပြသခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီကစားသမားတွေထဲကမှ အကောင်းဆုံး ကစားသမားတွေကို Goal.com အားကစားဝက်ဆိုက်ဘ် ကဖော်ပြခဲ့ပြီး ဒီအထဲမှာ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ လာကာဇက် Lacazette နဲ့ ဟာဇက် Hazard တို့ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းက ဆောက်သမ်တန်အသင်းကို ( ၀ – ၃ )နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ဟာဇက်ဟာအသင်းကို အကောင်းဆုံး ဦးဆောင်ကစားခဲ့ပြီး တစ်ဂိုးသွင်း တစ်ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းက ဖူလ်ဟမ်ကို ( ၁ – ၅ )ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ လာကာဇက်ဟာ အသင်းအတွက် (၂)ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ လာကာဇက်ရဲ့ ဒုတိယသွင်းဂိုးဟာ အဲဒီပွဲစဉ်ရဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ဒုတိယဂိုးဖြစ်ခဲ့ပြီး လာကာဇက်ဟာ ဒီဂိုးကို ကောင်းမွန်တိကျတဲ့ အဝေးကန်ချက်နဲ့ သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လာကာဇက်ရဲ့ ဒုတိယဂိုးကြောင့် အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ပွဲကိုပိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး အခုလိုဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲရရှိခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်တွေအတွက် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၈)ရဲ့ အကောင်းဆုံး(၁၁)ယောက်စာရင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Lloris ( Spur )
2. Trippier ( Spur )
3. Boly ( Wolves )
4. Ake ( Bournemouth )
5. Adam Smith ( Bournemouth )
6. Eric Dier ( Spur )
7. Barkley ( Chelsea )
8. Brooks ( Bournemouth )
9. Sigurdsson ( Everton )
10. Hazard ( Chelsea )
11. Lacazette ( Arsenal )
Photo: Arsenal Twitter , The Times , The Independent
ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ(၈)ရဲ့ အကောငျးဆုံး(၁၁)ယောကျစာရငျးမှာပါဝငျခဲ့ကွတဲ့ လာကာဇကျနဲ့ ဟာဇကျ
ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ(၈)ကတော့ ပွီးဆုံးခဲ့ပါပွီ။ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ(၈)မှာ ပှဲကောငျးတှပေါဝငျခဲ့ပွီး အကောငျးဆုံးစှမျးဆောငျရညျတှကေို ပွသခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှလေညျး ရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီကစားသမားတှထေဲကမှ အကောငျးဆုံး ကစားသမားတှကေို Goal.com အားကစားဝကျဆိုကျဘျ ကဖျောပွခဲ့ပွီး ဒီအထဲမှာ နာမညျကြျောကစားသမားတှေ ဖွဈကွတဲ့ လာကာဇကျ Lacazette နဲ့ ဟာဇကျ Hazard တို့ပါဝငျခဲ့ကွပါတယျ။
ခယျြလျဆီးအသငျးက ဆောကျသမျတနျအသငျးကို ( ၀ – ၃ )နဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျမှာ ဟာဇကျဟာအသငျးကို အကောငျးဆုံး ဦးဆောငျကစားခဲ့ပွီး တဈဂိုးသှငျး တဈဂိုးဖနျတီးပေးခဲ့ပါတယျ။ အာဆငျနယျအသငျးက ဖူလျဟမျကို ( ၁ – ၅ )ဂိုးနဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ ပှဲမှာ လာကာဇကျဟာ အသငျးအတှကျ (၂)ဂိုးသှငျးယူပေးခဲ့ပါတယျ။ လာကာဇကျရဲ့ ဒုတိယသှငျးဂိုးဟာ အဲဒီပှဲစဉျရဲ့ အာဆငျနယျအသငျးအတှကျ ဒုတိယဂိုးဖွဈခဲ့ပွီး လာကာဇကျဟာ ဒီဂိုးကို ကောငျးမှနျတိကတြဲ့ အဝေးကနျခကျြနဲ့ သှငျးယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ လာကာဇကျရဲ့ ဒုတိယဂိုးကွောငျ့ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ပှဲကိုပိုထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့ပွီး အခုလိုဂိုးပွတျနိုငျပှဲရရှိခဲ့တာပါ။ ပရိသတျတှအေတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ(၈)ရဲ့ အကောငျးဆုံး(၁၁)ယောကျစာရငျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
by Ko Kyue . 19 mins ago